Waa maxay My Book About? — TRIP LEE - SITE RASMIGA AH
Ruth Keiredin • August 19, 2013 at 9:28 waxaan ahay • Reply
Waxaad tahay qofkii ugu wax dhiirigalin leh in dunida!
Trip: Waxaan jeclahay in aad music iyo waxbaristiisa ka Rabbigeenna Ciise. Waxaan doonayaa in aan weydiin sababta aad u dooratay in ay ku riday Phoenix a on cover album ah?
Waxaan akhriyey in ay calaamad xiriir weedhu?
isagoo jawaab keeni doono qaar ka mid ah gargaarka.